के एक जवाफ एक mitzvah छ? रब्बी माइकल अब्राहम
के एक जवाफ एक mitzvah छ?
रामबानले बुक अफ डिटेरोनोमी (अध्याय L को शुरुवात) मा आफ्नो टिप्पणीमा टेशुवा बनाउनको लागि मित्ज्वाह रहेको बताएको छ। यो मित्ज्वा पद (ibid.) बाट सिकेको छ: "र शब्बत परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरलाई।" अर्कोतर्फ, पश्चात्तापको नियम (५:५, ५) मा माइमोनाइड्सले लेखेका छन् कि यो पद इजरायलको अन्त्यले पश्चात्ताप गर्नेछ भन्ने परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। के माइमोनाइड्सको विधिमा पनि पश्चात्ताप गर्ने मिट्ज्वा छ?
הस्थिति (Mitzvah Shasad) र अरूले पहिले नै यस बिन्दुमा स्पष्ट विरोधाभासलाई औंल्याएका छन्। एकातिर, बिआज्ञाको पुस्तक (Mitzvah Ag) Maimonides लेख्छन्:
उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले Gd माथि उक्लनु अघि हामीले गरेका पापहरू र अधर्महरू स्वीकार गर्न आज्ञा दिनुभयो र तिनीहरूलाई जवाफ दिनुहुन्छ।
जवाफ दिन यहाँ कुनै आदेश छैन। कबुलीको विषयलाई यहाँ सशर्त मिट्ज्वाको रूपमा उल्लेख गरिएको छ: यदि एक व्यक्तिले स्वीकार गर्छ भने, उसले स्वीकारको कार्यान्वयन (र यो सबै बलिदान ल्याएर) को साथ स्वीकार गर्नुपर्छ। तेशुवा बनाउने काम यहाँ मित्ज्वाह जस्तो लाग्दैन (वधमा जस्तै, जसले मासु खान चाहन्छ उसले कानुनी रूपमा वध गर्नुपर्छ। वध एक सशर्त मिट्ज्वा हो, तर मासु खानु पक्कै पनि मित्ज्वाह होइन).
यसबाट श्रीमानले निष्कर्ष निकाल्छन् शिक्षा सहजकर्ता (Mitzvah Shasad), कि यदि एक पापी व्यक्ति फर्किएन भने, उसलाई पश्चात्ताप नगरेकोमा कुनै सजाय छैन (उनी केवल विगतको अपराधको लागि दण्डित छन्)। उनी थप्छन् कि यदि उनले पश्चात्ताप गरे र स्वीकार गरेनन् भने, उनले डेभिडोईले बनाएको मिट्ज्वा रद्द गरेन, किनकि यो सकारात्मक मित्भा होइन (यो एक 'अस्तित्व' मिट्ज्वा हो, जसले यो गर्छ उसलाई पुरस्कार छ, तर एक जसले यसलाई उल्लङ्घन गर्छ र यो गर्दैन उसले केहि रद्द गर्दैन)।
अर्कोतर्फ, पश्चात्तापको नियमहरू भन्दा पहिलेको मिट्जभोसको संख्यामा, माइमोनाइड्सले निम्नानुसार लेख्छन्:
एउटा आज्ञा बनाइएको छ, र यो हो कि पापी परमेश्वरको अगाडि आफ्नो पापबाट फर्कन्छ र स्वीकार गर्दछ।
त्यसैले फरक तस्बिर देखिन्छ । पाप गरेको व्यक्तिलाई उसको खराब कर्मबाट फर्कन आज्ञा दिइएको छ, र साथै उसलाई स्वीकार गर्न पनि आज्ञा दिइएको छ। यहाँ जवाफ बनाइएको मात्जाहको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, र यसमा दुई भागहरू छन्: जवाफ दिन र स्वीकार गर्न। यो हामीले माइमोनाइड्स बीका शब्दहरूमा देखेका कुराहरूको विरोधाभास होआज्ञाको पुस्तक। माइमोनाइड्सको विधिको व्याख्यामा, विभिन्न दिशाहरू भनिएको थियो, र वर्तमान अवस्थामा तिनीहरूले वास्तवमा यस विरोधाभासलाई विस्तृत गर्दैनन्। हामी यहाँ एक फरक दिशा प्रस्ताव गर्नेछ, को भूमिका को समझ को आधार मा आज्ञाको पुस्तक अनि जवाफको कुरा बुझेर।
Maimonides अघि चार जराहरूको अध्ययनबाट देख्न सकिन्छआज्ञाको पुस्तक उनको, माइमोनाइड्सले आफ्नो कोरममा टोराहमा स्पष्ट आज्ञा भएको मिट्जभोस मात्र राख्छन्। Midrasha (त्यहाँ दोस्रो मूलमा हेर्नुहोस्), वा Sabra, वा Knesset बाट सिकेका Mitzvot हाम्रो कोरममा समावेश छैनन्। यदि त्यसो हो भने, दौरिताबाट उल्लेख नभएको ऋण हुन सक्छआज्ञाको पुस्तक। निष्कर्ष यो हो कि एक मिट्ज्वा त्यहाँ देखा पर्दैन भन्ने तथ्यको मतलब यो टोराबाट मिट्ज्वा होइन भन्ने होइन।
के त्यहाँ तोराहमा टेशुवाको आज्ञाको बारेमा स्पष्ट आज्ञा छ? हामीले माथि देखेका छौं, कि माइमोनाइड्सका अनुसार पद "र शबाथ परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरको" प्रतिज्ञा हो र आज्ञा होइन। तैपनि, बिबलियो हात माइमोनाइड्सले पश्चात्ताप गर्ने कर्तव्यलाई पूर्ण कर्तव्यको रूपमा ल्याउँछ। यसको समाधान यो हो कि जब त्यहाँ चार्ज हुन्छ, यो सब्राबाट उत्पन्न हुन्छ, बाइबल होइन, त्यसैले यो देखा पर्दैन।Safamatz। यसको विपरीत, बिबलियो हात माइमोनाइड्सले हाम्रा सबै हलाखिक कर्तव्यहरू ल्याउँदछ, चाहे तोराबाट, मिद्राशाबाट, वा डरबन वा चलनबाट, र त्यसैले पश्चात्ताप गर्ने दायित्व पनि त्यहाँ देखा पर्दछ।
हामीले फेला पारेका छौं कि कम्तिमा माइमोनाइड्सका अनुसार जवाफ दिने दायित्व साब्रामा आधारित छ। यदि त्यहाँ साँच्चै एउटा च्यानल छ जुन परमेश्वरले हामीलाई फर्काउन र हाम्रा पापहरूको प्रायश्चित गर्नको लागि सिर्जना गर्नुभएको छ, तब केवल साब्राबाट हामीले यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ (ब्रिशमा देखा पर्ने मिड्राश हेर्नुहोस्। शारेई तेशुवाह R.I. को लागि, जेलमा रोईएको भूमिगत बारे, जसको माध्यमबाट प्रत्येक कैदी बाहिर जानुपर्दछ)।
यो पनि कारण हो कि H. Teshuvah मा Maimonides ले कानूनहरू मात्र सूचीबद्ध गर्दैन, तर Teshuvah को प्रक्रियालाई पनि वर्णन गर्दछ, र Teshuvah को लेखकको सद्गुण (Ibid. F हेर्नुहोस्) को व्याख्या गर्ने सम्भावना र दायित्वलाई अन्तर्निहित गर्दछ। जवाफ। हामीले माइमोनाइड्सका अन्य हलचिक फाइलहरूमा यस प्रकारको लेखन फेला पार्दैनौं। यो बाहिर जान्छ कि यी सबै एक जवाफ बनाउनु पर्छ भनेर हामीलाई विश्वस्त गर्न को लागी हो, र यो गर्न सकिन्छ। माइमोनाइड्सले आफ्नो हलाखिक पुस्तकमा हामीलाई मिट्ज्वा गर्न मनाउन खोज्नुको कारण यो हो कि मिट्ज्वा (= जवाफ) मा कुनै आज्ञा छैन। यसको जग साब्रामा छ, र यसैले माइमोनाइड्सले हामीलाई विश्वस्त गराउनु पर्छ कि यद्यपि यो गर्न अनिवार्य छ, र यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आज्ञाहरू मध्ये कुनै पनि होइन (र हेर्नुहोस्। लचम PG HG, जसले लेखे कि जसले कार्यमा पश्चात्ताप नगरेको उसलाई यसको लागि मुद्दा चलाइनेछ, र धिक्कार आफैंमा पाप हो। को शब्दहरु को विपरीतस्थिति माथि जवाफ नदिनु पक्कै पनि अपराध होइन। र हुनसक्छ त्यहाँ गर्ने र बाँकी वर्षको बीचमा विभाजन छ)।
हाम्रो टिप्पणीको मार्जिनमा हामी नोट गर्छौं कि सामान्यतया हलाखिक कर्तव्यहरू सम्बन्धी आदेशहरूको अभावको कारणले गर्दा ती हलाखिक दौरीतामा समावेश गर्न पर्याप्त महत्त्वपूर्ण छैनन्। तर त्यहाँ आज्ञाहरू छन् जसको लागि आज्ञाको अभाव तिनीहरूको अधिकांश महत्त्व र पूर्णताको कारणले ठ्याक्कै उत्पन्न हुन्छ। Gd को काममा जग बस्ने मिट्जोसमा, टोराले हामीलाई आज्ञा नगर्न सावधान छ, ताकि हामी इटेरुटा डेल्टटाबाट त्यसो गर्छौं।
रब्बीले आफ्ना पत्रहरूमा पुण्यको कामको सन्दर्भमा समान आधारभूत सिद्धान्त लेख्छन्। उहाँले त्यहाँ स्पष्ट गर्नुहुन्छ कि ईश्वरको काममा आधारभूत कुराहरूमा आज्ञा नगर्ने र नगर्ने महान हो भन्ने प्रारम्भिक धारणालाई समर्थन गरिन्छ। यस कारणले गर्दा टोराले हामीलाई तिनीहरूको बारेमा आदेश दिएन। जवाफ दिने कर्तव्य यसको प्रमुख उदाहरण हो।
हाम्रा पिता र राजा, हामी तपाईंको अगाडि पूर्ण पश्चात्तापमा फर्केका छौं।
म सम्पूर्ण बेइट येशिवा, रोश येशिव श्लिता, समर्पित कर्मचारीहरू, सबै प्यारा विद्यार्थीहरू र तिनीहरूका परिवारहरूलाई सामान्य रूपमा सम्पूर्ण बेइट इजरायल, Tzaddiks को पुस्तकमा राम्रो लेखन र हस्ताक्षरको कामना गर्दछु। यो एक सफलता र पवित्र आराम को वर्ष होस्। स्वास्थ्यको एक वर्ष (विशेष गरी प्रिय केटा इजरायल योसेफ बेन रुथ बेन टोलिला र हामी सबैको लागि)। टोरा र काममा अलियाहको वर्ष, र हाम्रा सबै कामहरूमा सफलता।
 र हो उसले बिमानव जीवन, रशारेई तेशुवाह R.I
 यद्यपि GRIP ले उनको व्याख्यामाआज्ञाको पुस्तक Rasg को, व्याख्या गर्दछ कि Rasg विधि मा मासु खान को लागी एक मित्वा छ जब हाम्रो अवस्था राम्रो छ, जुन पद बाट सिकेको छ: तर यो एउटा अनौठो विधि हो, र पक्कै पनि मासुको सीमा फराकिलो नहुँदा र खानुमा कुनै मिजाज नभएको अवस्थामा पनि मानिसले मासु मात्र खान चाहेको अवस्थामा पनि वधको व्यवस्था हुन्छ।
 उहाँको दर्शन सरल छ: यदि साँच्चै स्वीकार बिना पश्चात्ताप पाप थियो, अर्थात्, रद्द गरियो, किनकि त्यसोभए पाप गरेको र स्वीकार नगरी पश्चात्ताप गर्नेको अवस्था पाप गरेको र कुनै पनि पश्चात्ताप नगर्ने भन्दा खराब छ। यो अवश्य पनि असम्भव छ।
 त्यहाँ mitzvos को धेरै उदाहरणहरू छन् जसमा केही विवरणहरू समावेश छन्। उदाहरणका लागि, चार प्रजातिहरूको आज्ञा, वा ट्यासलको आज्ञा (हल्का नीलो र सेतो)। Maimonides को रूट XNUMX मा यसको बारेमा हेर्नुहोस्।
 कोही-कोहीले यसरी मिट्जोसको संख्याबाट यिशुव ऐको मिट्ज्वाको अनुपस्थितिको व्याख्या गरेका छन्, यद्यपि त्यहाँ केही प्रमाणहरू छन् कि माइमोनाइड्सले पनि यो टोराको मिट्ज्वा हो भनेर सहमत छन्।
 "योगदान र चलह: आज्ञाहरू र ईश्वरको इच्छा बीच" लेखहरू पनि हेर्नुहोस्। दिउँसो काज (र त्यहाँ मैले दुई प्रकारका यस्ता मिट्भोसहरू बीच छुट्याएँ)।
mikyab मा Itamar Ben Gvir को जवाफ
mikyab मा के इरान यहाँ छ? प्रगतिशीलता र विवेकशील उदारवादमा (स्तम्भ ४८३)
धेरै कम (Hananel लाई) मा के इरान यहाँ छ? प्रगतिशीलता र विवेकशील उदारवादमा (स्तम्भ ४८३)
योसी लाओर मा के इरान यहाँ छ? प्रगतिशीलता र विवेकशील उदारवादमा (स्तम्भ ४८३)